करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले गत आवमा करिब १५ करोड कर संकलन गर्यो - Aarthiknews
खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १४ करोड ७५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा रु. दुई करोड ५५ लाख ५५ हजार, भदौमा रु. ३८ लाख २७ हजार, असोजमा रु ५६ लाख ५७ हजार, कात्तिकमा रु. ६२ लाख आठ हजार, मङ्सिरमा रु. ६० लाख ८५ हजार, पुसमा रु. एक करोड १९ लाख चार हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको कर अधिकृत गोपाल राईले जानकारी दिए ।
यस्तै माघमा रु. एक करोड ७७ लाख ९७ हजार, फागुनमा रु. ७४ लाख ५१ हजार, चैतमा रु. ३८ लाख ४४ हजार, वैशाखमा रु ७४ लाख ४७ हजार, जेठमा रु एक करोड १५ लाख ७४ हजार र असारमा रु चार करोड एक लाख २६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको उहाँले बताए । यस कार्यालयअन्तर्गत ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना करदाता रहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको कूल पूँजीगतमध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख ध्रुव कार्कीले बताउनुभयो । कूल पूँजीगत बजेट रु एक अर्ब १९ करोड ८९ लाख १७ हजार ५९९ मध्ये रु ६० करोड रु एक लाख १९ हजार खर्च भएको छ ।